Cirweyni darteed Injineer loogu diiday inuu wax ka cuno Maqaayad | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Cirweyni darteed Injineer loogu diiday inuu wax ka cuno Maqaayad
Cirweyni darteed Injineer loogu diiday inuu wax ka cuno Maqaayad
Posted by: Ahmed Haaddi September 24, 2018
Muqdisho – Jaroslav Bobrowski, oo ah da’yar ku nool Jarmalka ayaa laga mamnuucay maqaaayd la yiraahdo ‘an-all-you-can-eat sushi restaurant’ kaddib markii uu cunay 10 saxan oo cunto ah – xaalad milkiilaha maqaayadda uu u arkay mid aan caadi aheyn una fiicneyn ganacsigiisa.
Bobrowski waa injineer ku gaaroobay software-ga iyo jirdhise wuxuuna ku jiraa hab cunna-qaadasho goonni ah oo ah inuusan 20 saacadood oo xiriir wax cunin. Kaddib marka uu rabo inuu cuno raashiin, wuxuu wadaa ilaa uu dhowr jeer daacdo.
Toddobaadkii hore, isaga iyo saaxiibtiis waxay u cunno doonteen maqaayadda Shushi oo ku taalla Landshut, Bavaria – halkaas oo uu bixiyay lacag dhan €15.90 kaddibna uu saacad dul fadhiyay miiska si uu u faarujiyo saxamo gaaraya 10 xabo oo loogu keenay cunnooyin kala duwan.
Kabal-yeeriga maqaayadda ayaa ku daalay dalabkiisa badan, laakiin markii uu dhammeystay waxaa loo sheegay inuusan halkan mar danbe ka heyn marti soo dhaweyn leh.
‘Mudane Bobrowski in badan halkan kama casuunid, waayo tankaadu wuxuu la’eg yahay isu-geynta shan qofood sadkooda,’ ayaa loogu jawaabay mar uu ka biyadiiday go’aanka maqaayadda.
Mar la weydiiyay haddii uu heli karo meel kale oo uu cunno ka miisan karo, wuxuu sheegay inuu og yahay mid kale oo ku taalla Landshut oo – iyaga oo og cir-weynidiisa – u sheegay inuu halkan ku leeyahay cabitaan dheeri ah marka uu cunnadiisa qaato.
Previous: Tartanka kubadda cagta degmooyinka Gobolka Banaadir oo caawa sii idlaanaya
Next: Xiddigga ugu wanaagsan dunida oo caawa lagu caleema saarayo London